Imibuzo Evame Ukubuzwa - XGEAR
Izintengo zethu zingashintsha kuye ngokuhlinzekwa nezinye izici zemakethe.Sizokuthumelela uhlu lwakamuva lwamanani ngemva kokuthola umlayezo wakho ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Yebo, sidinga wonke ama-oda wamazwe ngamazwe ukuthi abe nenani eliqhubekayo le-oda elincane.Uma ufuna ukudayisa kabusha kodwa ngamanani amancane kakhulu, sicela usithinte ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Yebo, singahlinzeka ngemibhalo eminingi ehlanganisa Izitifiketi Zokuhlaziya / Zokuhambisana, Umshwalense, Umsuka, kanye neminye imibhalo yokuthekelisa lapho kudingeka khona.
Kumasampuli, isikhathi sokuhola cishe yizinsuku eziyi-7.Ngokukhiqiza ngobuningi, isikhathi sokuhola siyizinsuku ezingama-30-45 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozithi futhi sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho.Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela uhlole izidingo zakho ngokuthengisa kwakho.Kuzo zonke izimo sizozama ukwanelisa izidingo zakho.Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza kanjalo.
Ngingathola imikhiqizo kusenesikhathi?
Yebo, sinezindawo zokugcina izimpahla ezimbili e-United States, uma useMelika, kokubili ukungenisa okuqondile ngomkhumbi kanye nomkhumbi wasekhaya kuyatholakala.
Samukela izinhlobo eziningi zokukhokha ezifana ne-L/C, D/A, D/P, T/T: 30% idiphozi kusengaphambili, 70% ibhalansi uma iqhathaniswa nekhophi ye-B/L.
Sinikeza iwaranti yezinto zethu zokwakha kanye nomsebenzi, ukuzibophezela kwethu kungukwaneliseka kwakho ngemikhiqizo yethu.Imikhiqizo ehlukene izoba nesikhathi esihlukile sewaranti, kuya ngokuthi yisiphi isitayela somkhiqizo.